वास्तविक समाचार उठाएको छ
कसले राहत प्रेस कसरी निर्माण गर्न चाहन्छौं छैन? नियमित प्रशिक्षण र इच्छुकता -, खेतमा विशेषज्ञहरूका अनुसार, सफलता प्रमुख छन् जो मापदण्ड छ। आज तपाईं सट्टा पेट, लगनशील भई लागिरहेमा र मांसपेशी परिभाषा निर्माण गर्न कसरी समझ प्रेस भने पनि आफ्नो शरीर आकार मा इच्छित परिवर्तन गर्न नेतृत्व गर्नेछन्।
सबै को पहिलो, यो शरीर निर्माण मा प्रारम्भिक चरण समावेश बुझे गर्नुपर्छ मांसपेशिहरु को एक सेट, र त्यसपछि मात्र हामी मांसपेशी राहत संग काम गर्दै छन्। र यो , वजन सेट नियम, एक आरक्षित संग बाहिर छ। एक सिर्जना मांसपेशी को राहत, खेलाडी रुचि तरकारी, फल, र उच्च-क्यालोरी, फैटी खाद्य पदार्थ इन्कार, एक सख्त आहार बताउँछ।
मांसपेशी राहत सामना मुख्य कारक, पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या संख्या छ। यसैले शरीर बोसो र वृद्धि राहत को जलिरहेको छ। तर, फिर्ता सुरुमा। वास्तवमा, सबै को पहिलो, आज हामी राहत प्रेस संग चिन्तित हुनुहुन्छ। यसलाई केही खेलाडीहरूलाई सबै तरिका आफ्नो मिडिया को मांसपेशिहरु बारेमा भूल कि विशेषता हो, र अरूलाई बस एक राहत प्रेस कसरी निर्माण गर्न थाहा छैन।
यसलाई त्यहाँ मिडिया धेरै प्रकार हो भनेर थाह, केही anatomical सुविधाहरू बुझे गर्नुपर्छ। यी समावेश: माथि, तल, छेउमा। तिनीहरूलाई प्रत्येक हेरविचार र लगनशीलताको आवश्यकता छ। निस्सन्देह, प्रत्येक लागि त्यहाँ केही अभ्यास हो।
इम्बोस गरिएको प्रेस राम्रो र माथि जो एक जिम प्रदान गर्न सक्छन्, प्रासंगिक अवस्था पंप गर्न सजिलो तरिका हो। आखिर, उहाँले (हल) हाम्रो उद्देश्य उपकरणहरू सिमुलेटर समर्पित छ।
को भुँडी घन को शीर्ष मा स्थित, भनिन्छ शीर्ष दबाव। चार तिनीहरूलाई को, र आफ्नो अनुपस्थितिको पीठ मा अभ्यास गर्नुपर्छ मा। यस्तो अभ्यास भएको खेलाडी उनको टाउको पछि दुवै हात को Palms कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग छन्, र त्यसपछि bends (twists) को मुर्कुट्टा आफ्नो कोहनी को नाइटो स्पर्श सकून्। सुरुमा हामीले अधिकतम flexion संग गर्न पाँच नजिकिंदै को कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिन्छौं।
तीस पटक पुग्न एक दृष्टिकोण मा पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या एक नम्बर पछि, व्यायाम केहि थप जटिल छ। अब तपाईं एक डम्बबेलनेबुला छान्न र बिस्तारै यसको वजन वृद्धि, उनको संग व्यायाम गर्न सक्दैन। विशेषज्ञहरूले सजिलो व्यायाम छैन भनेर चेतावनी, तर तपाईं एक राहत प्रेस चाहिएमा यो, त्यसैले हुनुपर्छ।
चार तल्लो पेट पासा तल्लो प्रेस, र अन्य तरिकामा तिनीहरूलाई मिलाउ। यस समयमा तपाईं मुर्कुट्टा र खुट्टा उचाल्न हुनेछ। एकै समयमा, यो अत्यधिक, सुरु गर्न गाह्रो भने, हुर्के घुँडा संग व्यायाम गर्न कोशिश खुट्टा सिधा राख्न, तर मनमोहक छ। दृष्टिकोण पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या नै नम्बर अघिल्लो व्यायाम मा जस्तै हुनुपर्छ।
खैर, यो मा सार्न समय एक पार्श्व थिच्नुहोस्। अब शरीर पक्ष एकान्तरण, परिक्रमण संग उठाएर गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, दायाँ, बायाँ पालो अर्को एउटा पालो एक समय। र तपाईं उठाएको घुँडा संग नै व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, एकांतर को घुँडा काँध छुनुहोस्। बायाँ काँध, अन्य बस विपरीत, र यति मा को सही गोडा एक पटक।
आफ्नो घर को मामला मा अप पंप प्रेस राहत, तपाईं पनि केही सिद्धान्तहरू पालन गर्नुपर्छ। कृपया निम्न सल्लाह याद गर्नुहोस्। यो एक फ्लैट, हार्ड सतह पर्याप्त छ मा पल्टिने गर्न आवश्यक छ। को घुँडा मा खुट्टा मोड्नु। अब, शरीर यसको अधिकतम उचाइ बढाएर हुनुपर्छ। पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या र दृष्टिकोण संख्या ठूलो पारिएको हुनुपर्छ।
एउटा सानो र बिस्तारै बढ्दै सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, अधिकतम पुग्छ। यो एक जिम छैन, तर समर्पण र उपयुक्त, वास्तविक परिणाम लगनशील भई लागिरहेमा पक्का खुसी हुनेछ, र आंकडा को एक पर्याप्त स्तर, क्रमशः, परिवर्तन गरिनेछ। र तपाईंले घरमा एक राहत प्रेस सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यो र मलाई शुभकामना इच्छा अनुमति!
स्विङ हतियार फ्रान्सेली zhimom स्थितिमा
समीक्षा, फोटो: eyebrows र परेलाहरु Estel लागि डाई
Blastocyst - यो के हो? वर्गीकरण simtomy, निदान
येकाटिरिनबर्ग मा अस्पताल छोडेर: ठेगाना, विवरण, इतिहास र दन्त्यकथा
कसरी डरलाग्दो मास्क आफ्नै हात बनाउने?
कम्प्युटर नेटवर्क: मुख्य विशेषताहरु, वर्गीकरण र संगठन को सिद्धान्त
सबैभन्दा benchmarks: रूसी
क्रेडिट मा सीमितता को विधान